SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Basque Batak (Toba) Bislama Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Finnish Fon French Galician Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hebrew Hungarian Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Myanmar Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tarascan Telugu Thai Turkish Ukrainian Valencian Vietnamese Yoruba
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Zvapupu zvekuItaly Zvinobatsira Vavakidzani
Mimwe misha iri kuchamhembe kweguta reMoncalieri, kuItaly, yakaparadzwa nemadzvotsvotsvo emvura muna 2016. Mune dzimwe nzvimbo, mvura yaitosvika mumabvi. Rimwe pepanhau rakanyora kuti, “Mvura yacho yakazara kwese kwese.” Vanhu vanosvika 1 500 vakabva vakurumidza kubviswa munzvimbo yacho. Hapana akafa nekuti vanoyamura vakaita chimbichimbi. Asi mhuri dzakawanda dzakarasikirwa nezvinhu.
Kushanda Pamwe Chete Pakubatsira Vanhu
Zvapupu zvaJehovha zvakaronga kuti pave nemapoka evanhu vanoenda kunobatsira. Vakabatsira nekubvisa madhaka nehumwe hungwanda-ngwanda mudzimba uye kubudisa midziyo yakanga isina kunyanya kuparara. Rimwe boka raiva nezvekushandisa uye zvekudya zvinopisa parakasvika pane mumwe mugwagwa wakanga wakavharwa, rakabvumidzwa kupinda kuti rinobatsira imwe mhuri. Zvapupu hazvina kungobatsirana pachazvo, asi zvakabatsirawo nevavakidzani vanopinda mamwewo machechi.
Semuenzaniso, dzimba dzepasi dzerimwe furati dzakanga dzakazara mvura. Vanoyamura pavakangobvisa mvura yacho, Zvapupu zvakabva zvatanga kubatsira chimwe Chapupu chinonzi Antonio nemhuri yake kubvisa marara akanga azara muimba yavo yepasi. Vakabva vazobatsirawo vamwe vanhu vanogara pafurati racho. Vakamira vakaita raini vachitambidzana zvinhu uye mumaawa mashomanana vakanga vachenesa dzimba dzese dzepasi. Munhu wese akatenda chaizvo basa ravo. Mumwe mukadzi anogara pafurati racho anonzi Viviana akaudza mudzimai waAntonio aine misodzi yekufara kuti: “Mutitenderewo hama dzenyu, vashoma vanozvigona zvamaita izvi!”
Mune mumwe musha wakanyanya kuparadzwa nemafashamo, vagari veko vakaona basa raiitwa neZvapupu. Zvavakaona zvakaita kuti vadewo kubatsira pabasa iri uye vaitevedzera mirayiridzo yavaipiwa neaitungamirira.
Kutenda Rubatsiro Rwakakura
Imba yemumwe murume yakaparara zvakanyanya, uye mugaraji make makanga makazara madhaka. Akashamiswa kuona Zvapupu 8 zvichishanda kwemaawa 4 zvichibvisa marara mugaraji make. Nekufara, akambundira vamwe vashandi vacho akabva aisa meseji pasocial media achitenda rubatsiro rwavo rwakakura.
Chimwe Chapupu chinoti: “Takabatsira vavakidzani vedu vakawanda vasiri Zvapupu, vakawanda vavo vane makore ekuma80. Vamwe vavo vaichema nekufara, vachitenda zvatakanga tavaitira.” Mumwe murume anopinda chechi yeRoma akaudza Zvapupu kuti aitenda chaizvo basa ravaiita. Akatiwo: “Zvakanaka chaizvo kuti takabatsirana pasinei nekuti tinopinda machechi akasiyana.” Mumwe murume akati: “Ndine urombo kuti vanhu vanongokuzivai nekufamba kwamunoita muchiparidza musi weSvondo asi havazivi mamwe mabasa ekubatsira vanhu amunoita.”